Jodie Sweetin anọghị na Rehab, nwere nkọwa zuru oke maka ihe kpatara o ji biri n'ụlọ ọgwụ - Blọọgụ ahụike 2022
Jodie Sweetin anọghị na Rehab, nwere nkọwa zuru oke maka ihe kpatara o ji biri n'ụlọ ọgwụ
Na mbido izu a, akwụkwọ akụkọ dị iche iche kọrọ na onye bụbu onye na-eme ihe nkiri Full House Jodie Sweetin na-enweta ọgwụgwọ ọgwụ riri ahụ n'ụlọ ebe obibi. Ma Sweetin kpochapụrụ asịrị ahụ, na-agwa TMZ na ọ bụ "oke ehi ndị dị otú ahụ ** t … Adịghị m na mweghachi."
A maara Sweetin nke ọma maka ịkpọ Stephanie Tanner na 90s sitcom Full House. Kemgbe ọrụ ahụ, o depụtara ihe ndekọ aha ya bụ UnSweetined, bụ nke o ji kọwapụta mgbake ya na ọgwụ methamphetamine. Methamphetamines bụ ihe na-akpali akpali nke enwere ike ịmepụta na pill, powders, ma ọ bụ kristal dị nro. A na-akpọkarị ụdị kristal "kristal meth."
"M bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, onye na-achọ ọdịmma onwe ya nanị, onye na-enweghị nchebe, onye iwe ọkụ na onye na-atụ egwu na-ebi ndụ abụọ," Sweetin kwuru banyere ịṅụ ọgwụ ọjọọ. "Ekpuchire m nsogbu m site n'ime ka hà nwere obi ụtọ na-ekwu na ihe niile dị mma."
Ma kemgbe Disemba afọ 2008, ọ nọgidere na-akpachapụ anya. Ya mere, gịnị kpatara asịrị na-adịghị akwụsị akwụsị nke ebubo nlọghachi azụ? Sweetin kwuru na di ya gbara alụkwaghịm bụ Morty Coyle nwere ike na-akpata asịrị ahụ.
O kwuru, sị: "Nkwụsị na-esi ike ma ụfọdụ ndị [di ya] adịghị eme ka ọ dịrị ha mfe. "Ndị mmadụ na-awụ akpata oyi n'ahụ ma na-akpa ọchị… Ị maghị onye ọ bụla ruo mgbe gị na ha kewapụrụ."
N'adịghị ka akụkọ, Sweetin anaghị achọ ọgwụgwọ n'ụlọ ọrụ ahụ. Ọ na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ndị nwe ya kwere ka ọ bata ka di ya chụpụrụ ya.
"Ana m arụ ọrụ maka etiti ahụ ma ha na-emesapụ aka n'ezie n'inyere m aka ebe m ga-anọ dị ka [mbụ] Morty chọrọ ka m pụọ na njedebe nke ọnwa," Sweetin kọwara. "Ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ kwuru na m nwere ike ịnọ ebe a ka m nwetara ihe."